Komishanka Doorashooyinka Oo Ka Hadlay Hawlaha u Qabsoomay | Saxil News Network
Komishanka Doorashooyinka Oo Ka Hadlay Hawlaha u Qabsoomay
Tan iyo markii ay xubnaha Guddiga Doorashadu ka soo noqdeen safar shaqo oo ay ku tageen dalka Kenya, waxay Gudigu ku hawlanaayeen hawlaha culus ee horyaala oo ay ka mid tahay bixinta qandaraasyada diiwaangelinta codbixiyayaasha.
1. in Komishanku dhamaystiray bixinta qandaraasyadii shirkadaha ajnebiga ah.
2. safar ay dhowaan geli doonaan xubnaha Komishanka iyo gudiga farsamo ee xisbiyada qaranka oo Gobolada dalka oo dhan lagu maraayo.
3. In Komishanku ku guda jiro dhamaystirka shaqaalaha xarunta iyo Gobolada.
4. in laga wada shaqeeyo sidii loo heli lahaa qorshe dhamaystiran oo suurta geliya diiwaangelin hufan.
5. in la joogteeyo kulamada shaqo ee Komishanka iyo xisbiyada qaranka.Alla Mahad Leh.
Guddiga Komishanka Doorashooyinka Qaranka ee Somaliland